के होला निजी विद्यालयहरुको भविष्य ? – Apan Dainik
अपन दैनिक न्युज डेस्क Follow on Twitter २०७८ पुष ८ गते बिहीबार १५:४६
नेपालमा अहिले झण्डै १० हजार निजी अथवा संस्थागत विद्यालयहरू रहेको बताइन्छ । उच्च शिक्षा र मन्टेश्वरीलाई पृथक राखेर हेर्ने हो भने अहिले निजी विद्यालयहरूमा झण्डै २५ लाख ५० हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा विद्यालय दर्ता भएपछि नै निजी विद्यालयहरू आधिकारिकरूपमै नाफामुखी भएका हुन् । उनीहरूले निजी लगानीमा नाफामूलक विद्यालय सञ्चालन गरेर शिक्षा सेवाअन्तर्गत नाफा कमाउँदै आएका छन् । शिक्षामा नाफामूलक व्यवसाय गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन ?कम्पनी ऐनमा दर्ता भएकाले सेवामात्र दिने वा सेवामूलक व्यवसाय गर्ने ? यो राष्ट्रिय सरोकारको महत्त्वपूर्ण विषय हो।
संविधानले नै निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा अब माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाका लागि महँगाे शुल्क तिर्नुपर्ने कि नपर्ने ? अब शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी आवश्यक छ वा छैन ? निजी विद्यालय विस्थापन गर्ने कि निरन्तर चलिरहन दिने ? गम्भीर बहस गरी ठोस निर्णय निकाल्नु जरुरी छ। –लेखक हरी ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुनुहुन्छ।
निजी विद्यालय शिक्षा हरी ज्ञवाली
नेपाल प्रहरीले भन्यो–म्यादी प्रहरीमा भर्ना खुलेको छैन
२०७८ फाल्गुन २६ गते बिहीबार १७:०५
कल्याणपुर नगर क्षेत्रका शिक्षक–कर्मचारी पठनपाठन छाडेर तलबभक्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा
२०७८ कार्तिक १६ गते मंगलवार ०८:०८